Chii chandingaita nezvandakaitwa mumabhuku e Amazon.com nekuda kwekufambira mberi?
Kana zvasvika pakutora mari isingabatsiri mari Amazon.com uye kutungamira kutungamira nekufambira mberi kwenguva refu, chinyorwa chakavanzika chekubudirira chinoputirwa mumararamiro evanhu vanotsvaga kutsvaga. Ndinoreva kuti kuramba uri mberi kwemutambo pa Amazon.com nekunyoresa kuonekwa pamusoro pepamusi wemakero - zvose zvaunoda ndeyokugadzirisa zvakakwana zvigadzirwa zvako. Asi kunyengedza ndechokuti kuva nezvose zviri panzvimbo iwe unofanirwa kuziva kuti ndechipi uye kuti ndezvipi zvakanyatsoitwa nguva dzose iwe uri kutumira chero sarudzo yekugadzirisa. Hezvino iwe unogona sei kuita izvozvo - shandisa mutsara unotevera hutsva kuti uve nekutarisa kwakarurama kubva pakutanga, usina kuparadza kunyange neminiti yenguva yako inokosha kana kushanda kwakanyanya.
Kunyoresa Mazano kuAmazon
Kana iwe uri kutamba zvakanaka neSearch Engine Optimization (SEO), unofanira kunge uine simba - vane nyanzvi dzepamusoro SEOs vanoti, zvinyorwa zvinogara zviri mambo. Ndinoreva kuti zvichida chero zvinyorwa zvese zvaunogona kuwana paWebhu ndizvo chaizvo zvinowanzobudirira kugadzirisa zvakanakira kuonekwa kwakanaka paIndaneti. Uye zvinhu zvose zvakanyatsogadziriswa zvakakodzera mu-kutendeuka zvinotangira kubva pakushandisa kweuchenjeri uye kuiswa kwakakodzera kwezvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa. Saka, kana iwe uchida kuona yako yakanyatsogadziriswa zvinyorwa pa Amazon.com uye iwe uwandu hwekutsvaga hunozvarwa nemucheka wesirivha - kushandisa zvakanyatsoshandiswa mazwi ekutsvaga zvinofanira kuva nhamba yako nhanho imwe uko.
Saka, ngatitarisana nayo - kuva neshoko rakakosha rakasarudzwa rinokosha zvakanyanya kuita kuti chigadzirwa chako chinyorwa padombo Amazon.com kumusoro kwekutsvaga tsvaga shopper. Ndicho chikonzero chekugonesa kunyatsobatsirwa kutsvaga kutsvaga pasina kushandisa nguva yakawandisa, ndinokurudzira kushandisa imwe yezvinhu zvinotevera zvinoshandiswa: Google Keyword Planner (zvakanaka kutanga nemhando dzakanaka dzekare dzisingabhadhari uye dzine tarisiro yakaisvonaka yeiyo Pai-Per inotevera -Click campaign), uyewo Merchant Words, AMZ Tracker, Scope, uye KeywordTool.io (ingosarudza yekutanga iwe unofanirana nezvose, sezvo chigadzirwa chose chinotsanangurwa chiri chechokwadi uye chinoshandiswa-chinopupurirwa ).
Mhando ipi zvayo?
Sei uchifanira kutanga kunyanya neCléword Planner Tool kuburikidza nekutsvaga kwenyika, uye kungozoenderera mberi nokutora imwe, zvakanyatsogadziriswa nheyo yevhangeri mubatsiri? Zvichida nokuti kana zvasvika kune
Nheyo dzinokosha - inofanirwa kuratidzirwa zvakajeka zviri pachena, somuenzaniso mune zvishandiso zvinyorwa, tsanangudzo, zvinyorwa zvebhuku pamusoro pechigadzirwa, nezvimwewo.
Zvakavanzwa Mashoko - hapana-brainer kuti iyi chikamu che keywords vanogara mumusana wekambani yeAmerica.Asi pavanenge vasingaoneki kune vatengesi chaivo, uye mitsva yekutsvaga, mafivha akavanzika anoita shoko ravo uye anobatsira maitiro ako ezvinyorwa anonyatsoronga. yekutengesa slang uye dzimwe nguva kunyange nemashoko asina kukodzera kushandiswa, ayo akave achishandiswa zvakanyanya semhando yebhizimusi - naizvozvo ndiyo iyo iyi yezvinyorwa zvinyorwa zvisingabviri kuiswawo, semuenzaniso, mumazita ehurumende.
Kunyora Anatomy pa Amazon.com kuD rive Your Ranking
Kana padziva rako guru remashoko ezvakagadzirirwa rakagadzirira, inguva yekuve nezvinhu zvose zviripo uye zvakagadziriswa mumiti yako peji. Uye nheyo huru yezvinyorwa zvekushandisa peji zvatichazoita kuti tigadzirise nguva dzose inoumbwa necheji imwechete yezvinhu zvinokosha. Tichifunga nezvekuti inofanirwa kugadziriswa ne-key target keywords - yekutanga uye yakanyanya-apa ndiyo inoda kunyatsotarisirwa pamusoro apo.
Nyaya yekunyorera iyo inowedzera nyaya huru yekutengesa mutengo.
Bullet Points inopa tsanangudzo yakachena uye yakajeka uye kushandisa mazano.
Mashoko Anotsanangurwa izvo chaizvoizvo zvinomirira shanduro yakawanda yeBullet Points.
Mifananidzo mikuru inotsigira chigadzirwa chega chega kuti ipe nhaurwa inobatsira yevatengi vanogara.
Ongororo yekugadzirisa Amazon.com musoro wezvakagadzirwa zvako zvinenge zvichida nzvimbo inonyanya kukosha pane iyo inoda kuiswa pamwe nemamwe mazwi makuru epamusoro sezvinobvira. Cherechedza, zvisinei, kuti iwe haufaniri kunge uine zvigadzirwa zvako zvakagadzirwa-jed-packed with keywords. Saka, kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa chako chinonzwisisika, ita kaviri kuti uite zvinhu zvose zviripo pane zvinotevera:
Isai mazwi makuru makuru pedyo nekutanga mukuderera kurongeka kwekukosha.
chikwata chemuti wekodzero chinobvumirwa kuti chiuye kusvika kune mazita 200..Nokudaro zvakangoita kwauri kuti usarudze kuti inguva yakareba sei.
Tsamba yese yekutanga yezwi rimwe nerimwe remutauro inofanira kugara ichinyorwa.
Numeri inofanira kunge ichinyorwa mumatare (e.g., 100 ichava yakanaka, uye zana - kwete zvachose).
Kunyange zvazvo ruzivo rwemashoko ekutengesa zviyero zvinowanzosvika nekusakwana, chigadzirwa chemugadziri hachifaniri kuve chinhu chinodiwa (zvechokwadi, kunze kwekuti chiri chaicho chakakosha uye chinonyanya kukosha).
Chinhu chakangofanana nechokujekesa ruvara-hapana chikonzero chekuve nechokunyorwa kwezvinhu zvose, kunze kwezvinhu izvo izvo.
Unogona kunge uchitoziva izvi, asi ini ndichiri kuisa runyora rwemashoko nokuda kwekukwana. Saka, kana ukanyora chero chigadzirwa chezvinhu pamusika uwandu hwemashamba - uye iwe unotungamirirwa zvakananga kune peji reji yebhusi nebhokisi remashoko. Kubva pane Amazon.com mitemo yakarongwa, teerera mazano anotevera kana ukasarudza kuti ndeipi nhovo iyo ingakwanisa kukukodzera iwe zvakanakisisa:
Tsanangudzo yepa bullet points inofanira kuvakwa nepamusoro-inobatsira data inoshanda uye hapana chimwe chinhu.
Zvose zvinotsanangurwa zvinosanganiswa zvinoshandiswa ZVINOFANIRA kuti zvive zvakakosha chete.
Rondedzera chigadzirwa chikuru chakakosha uye zvikomborero nenzira shoma, yakachena uye yakajeka.
Chirevo Chinyorwa & Zvifananidzo
Pakati pezvose zvinotsanangurwa nemagetsi uye kugadzirwa kwezvifananidzo zvinotsanangurwa. Ndicho chikonzero ini ndichakuratidza muchidimbu muchidimbu chekutsvaga kwakagadziriswa uye UNOFANIRA-ave nemashoko ekusimbisa:
Product Description - vakapfuma ane mazwi makuru, zvinoreva kuti ive yakasiyana. Kutaura pamusoro pemakororo makuru ekutengeswa kwevatengi, tsanangudzo yakanaka yezvakagadzirwa inofanira kuvhara dheta rose yakanyorwa zvakakwana uye yakazara.
Product Images - chete inopera ndeyokuti Amazon inobvumira kuti zvinyorwa zvose zvigadziridzwe zvisina kupfuura mapfumbamwe ezvifananidzo. Zvichida hazvina basa, asi ini ndichiri kukurudzira kufunga nezvekuvhara mukati, mararamiro uyewo zuva rega rega kushandisa chigadzirwa chemiti - uye wapedza Source .